Special Gaming Corner at Technoland (CityMall, St. John) - Yangon, Myanmar
Special Gaming Corner at Technoland (CityMall, St. John)
Event organized by Technoland Computer Trading Co., Ltd.
ကျွန်တော်တို့ Technoland ရဲ့ စိန်ဂျွန်း City Mall ဆိုင်ခွဲမှာ Gaming item တွေကို ခင်းကျင်းပြသဖို့အတွက် Special Gaming Corner ကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။
Special Gaming Corner ကို စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လည်း
Gaming Item မတ်လ ၂၆ ရက်ကနေ ဧပြီလ ၃၀ ရက်အထိ တစ်လကျော်ကြာ အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေ စမ်းသပ်ဆော့ကစားဖို့အတွက်လည်း Gaming PC တွေ စီစဉ်ပေးထားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ Special Gaming Corner မှာ ရောင်းချမယ့် promotion item တွေနဲ့ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီသိရဖို့ ဒီ event page လေးကို interest ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ going ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ထားလို့ ရတယ်နော်! ;)
Technoland (City Mall, St. John) ဆိုင်ခွဲလိပ်စာကတော့ ဆိုင်ခန်းအမှတ် - ၄ (IT Zone), ဒုတိယအလွှာ၊ အမှတ် - ၆၊ ပြည်လမ်းနှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပြီး ဖုန်းနံပါတ် - 09-952102050, 09-953102050 ကိုဆက်သွယ်ပြီးလည်း အသေးစိတ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ Technoland ရဲ့ စိနျဂြှနျး City Mall ဆိုငျခှဲမှာ Gaming item တှကေို ခငျးကငျြးပွသဖို့အတှကျ Special Gaming Corner ကို စတငျဖှငျ့လှဈလိုကျပါပွီခငျဗြာ။
Special Gaming Corner ကို စတငျဖှငျ့လှဈတဲ့ အထိမျးအမှတျအနနေဲ့လညျး
Gaming Item မတျလ ၂၆ ရကျကနေ ဧပွီလ ၃၀ ရကျအထိ တဈလကြျောကွာ အထူးဈေးနှုနျးတှနေဲ့ ရောငျးခပြေးသှားမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ လာရောကျဝယျယူအားပေးတဲ့သူတှေ စမျးသပျဆော့ကစားဖို့အတှကျလညျး Gaming PC တှေ စီစဉျပေးထားဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ ကြှနျတျောတို့ Special Gaming Corner မှာ ရောငျးခမြယျ့ promotion item တှနေဲ့ သတငျးတှကေို အခြိနျနဲ့ တပွေးညီသိရဖို့ ဒီ event page လေးကို interest ပဲဖွဈဖွဈ၊ going ပဲဖွဈဖွဈ လုပျထားလို့ ရတယျနျော! ;)
Technoland (City Mall, St. John) ဆိုငျခှဲလိပျစာကတော့ ဆိုငျခနျးအမှတျ - ၄ (IT Zone), ဒုတိယအလှာ၊ အမှတျ - ၆၊ ပွညျလမျးနှငျ့ မငျးရဲကြျောစှာလမျးထောငျ့၊ လမျးမတျောမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့ ဖွဈပွီး ဖုနျးနံပါတျ - 09-952102050, 09-953102050 ကိုဆကျသှယျပွီးလညျး အသေးစိတျ စုံစမျးနိုငျပါတယျ။
Corner of Min Ye Kyawswa Road and Pyay Road, Yangon, 11131, Myanmar